आलमको डरले बयान फेर्दै प्रत्यक्षदर्शी, करोडौं ठगेर नायक सुनिलदत्त पाण्डे फरार ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
आलमको डरले बयान फेर्दै प्रत्यक्षदर्शी, करोडौं ठगेर नायक सुनिलदत्त पाण्डे फरार ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Oct 24, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४४७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. राजपुर प्रकरणका चार आरोपी अझै फरार, प्रत्यक्षदर्शीले वयान फेर्न थाले
रौतहट । रौतहटको राजपुर प्रकरणका आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलम प्रहरी नियन्त्रणमा परेपनि अन्य ४ जना अभियुक्तहरु अझै फरार छन् । बम विष्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई जिउँँदै जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री आलमसहित ४ जनामाथि किटानी जाहेरी परेको छ । जसमध्ये अझै ४ जना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । फरार हुनेहरुमा मन्त्री अफताब आलमका भाई महताब आलम, स्थानीय शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज रहेको रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक नविन कार्कीले जानकारी दिनु भएको छ । फरार अभियुक्तहरुको खोजी कार्य भने जारी रहेको उनले बताए ।
२. प्रदेश–३ को राजधानी हेटौडाका सबै सीसी क्यामेरा बर्षौंदेखि बन्द !
हेटौंडा । प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडा नगर क्षेत्रमा ‘तपाई सीसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ भन्ने साइन बोर्ड राखिएको छ । तर, सो साइन बोर्डले मात्रै तपाईलाई निगरानी गरिरहेको छ, अर्थात् हेटौंडा नगर क्षेत्रमा करिब ५ बर्षअघि सुरक्षाको लागि राखिएका सबै ३८ वटा सीसी क्यामेरा बर्षौंदेखि बिग्रिएका छन् । शान्ति सुरुक्षाका लागि भन्दै राखिएका सीसी क्यामेराले काम नगरेपछि थप समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ । करिब ५ बर्ष अघि तत्कालीन जिविस, नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यवसायीहरुको सहयोगमा करिब २६ लाख ५० हजारमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो ।
सहकारीमार्फत नायक सुनिलदत्त पाण्डेको ठगी !
काठमाडौं । हरेक फिल्ममा हिरो र भिलेनको मुख्य भूमिका हुने गर्छ । भिलेनले गरेको कुकर्मलाई हिरोले रोक्ने काम गर्छन् र भिलेनलाई सजाय दिएको दृश्यलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । तर, उही फिल्ममा हिरोको भूमिका निभाउने नायकलेनै आम मानिसहरुलाई दुःख दिने काम गरेका छन् । हिरो भएर पनि भिलेनको काम गर्ने चर्चित नायकको नाम हो सुनिलदत्त पाण्डे । चर्चित नायक सुनिलदत्त पाण्डेको सहकारीले पैसा खाएर भागेपछि ९० जना भन्दा बढी मानिसहरुको बिचल्ली भएको छ । दुःखको मानो साँचेर भविष्यका लागि राखेका पैसा पाण्डे समूहले खाइदिएपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका हुन् ।